Kutholwe intombazane ibulewe eFedsam | News24
Kutholwe intombazane ibulewe eFedsam
isithombe: sithunyelweUNks Nokubonga Hlengwa otholwe ebulewe ngoMgqibelo.
UMNDENI wentombazane etholwe isibulewe endaweni yaseFedsam uthi angeke uze ukuthole ukuphumula ungakazi ukuthi kwenzakaleni kwindodakazi yawo.
UNks Nokubonga Hlengwa (35) waseMbali Unit 2 utholwe ebulewe ngesihluku wabe esephonswa endaweni eyisigange endaweni yaseFedsam ngoMgqibelo ekuseni mhla zingama-23 kuNhlolanja (February).
Ngokusho kukamalume wakhe uMnu Skhumbuzo Khoza uthe bengumndeni basakhungathekile ngalesi sigameko kanti namanje basafuna izimpendulo.
UNks Hlengwa kuthiwa watholwa ngumuntu mumbe ohlala eduzane kwaleso sikhotha nekuthizwa wathi wezwa umsindo ngoLwesihlanu ebusuku mhla zingama-22 kuNhlolanja (February) kungathi umuntu wesifazane okhalayo.
Ekhuluma ne-Echo uMnu Khoza uthe bagcina ukubona uNks Hlengwa ngoLwesihlanu ntambama ngemuva kokushaya nje kwehora lesikhombisa ntambama.
Uthe : “Kwafika abafana abathathu bama ngaphandle bamubiza nesizwa kuthiwa kulabo bafana kwakukhona nesoka lakhe.UNokubonga waphuma wabeka ukudla kwakhe ngoba bafika edla akazange asho ukuthi uyaphi nokuthi ngeke aze abuye.Kwahlwa saze salala engabuyi kwathi ngakusasa mina ngavuka ngaya emngcwabeni wakamakhelwane engakabuyi.
“Ngathi ngisasemngcwabeni ngabona sekufika amaphoyisa esezongicela ethi engizobheka ukuthi akuyena yini lona otholakale ebulewe endaweni yaseFedsam.Kuthiwa watholwa iphara elabona imilenze ekuseni ngesikhathi livuka labe selihlaba umkhosi libikela ikhansela kanye nomakhelwane namaphoyisa ngenhlanhla kukhona abantu ababembonile ukuthi wayegqokeni ngoLwesihlanu base bethi kungenzeka ukuthi uyena sabe sesiyabikelwa singumndeni,” kubeka yena.
UMnu Khoza uthe okubuhlungu kakhulu indlela abulawe ngayo umshana wakhe nayichaze njengesihluku.
“Angikaze ngiyibone into enje impilo yami yonke.Into engiyibonile angiyifiseli muntu.Bekungathi uklajwe ngobhushu, ekhanda enembobo amehlo akhe angathi kade bewaxhonxa ngoba aqhumile, umzimba wonke unezibazi engathi ubebengwa,wophele ngaphakathi engathi ubehudulwa phansi.Ngezansi ubengagqokile njengoba ibhulukwe lakhe kanye nesikhindi sakhe sangaphansi kutholakale buqamama naye.
“Ngiyakholelwa ukuthi umuntu owenze lento ubengaphilile ekhanda okanye kukhona uhlobo lwesidakamizwa esinamandla ekade esidlile ngoba akekho umuntu ophilayo ongenza isihluku esingaka.Baze bayibulala kabuhlungu ingane kadedewethu kade izilungele kangaka,” kubeke yena.
Uqhube wathi bengumndeni basazibuza ukuthi yini lena engaka ebingaze iholele ekutheni agcine esebulewe ngesihluku esingaka uNks Hlengwa.Uthe umshana wakhe ubengumuntu obezilungele ebathanda abantu kanti nabantu nabo bebemthanda.
“Ubengasiyena umuntu obevele ahamba anyamalale angaziwa ukuthi uyephi ngoba bekunguyena obehlala nogogo ekhaya emgada elala naye nasembhedeni.Nangosuku angazange abuye ngalo ugogo owabuza kuqala ekuseni ukuthi ulaphi ngoba ubengalele naye.Sigqenywe ingozi engeqiwa ntwala ngalesi sigameko.Sesinikele yonke into emaphoyiseni ngethemba lokuthi azokwazi ukuthi athole umuntu owenze loku ajeze nathi sazi ukuthi kwenzekani kumshana wami.”
UNks Nhlengwa uzofihlwa ngoMgqibelo ngemuva kwenkonzo ezoba sesontweni i-Full Gospel Church ngoMgqibelo mhlaka-2 kuNdasa (March).
Okhulumela amaphoyisa eMgungundlovu u-Seargant Mthokozisi Ngobese usiqinisekisile isigameko wathi amaphoyisa aphenya icala lokubulala kodwa bekungakaboshwa muntu.
“Ngiyakholelwa ukuthi umuntu owenze lento ubengaphilile ekhanda okanye kukhona uhlobo lwesidakamizwa esinamandla ekade esidlile ngoba akekho umuntu ophilayo ongenza isihluku esingaka.Baze bayibulala kabuhlungu ingane kadedewethu kade izilungele kangaka,”